မဟာကာလကြီး | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
မဟာကာလကြီး	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဟူးရားဗေဒင်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# သူ့ကို နိုင်လို ဆ, ကိုခို လိုရာဆေးဖေါ်သုံးPublished March 4, 2010 | By dr.tin bo bo	အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ဦးလောက်မှာ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ စတင် တီထွင်သူလို့ အသိအမှတ်ပြု ခံရသူကတော့ တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ အတုလ “ခင်ကြီးဖျော်” လို့ အမည်နာမတွင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော် အတုလ ခင်ကြီးဖျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” ထဲမှာ ဒီလို ရေးသားထား တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | 17 Comments	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,152)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,938)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,234)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,225)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,306)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,496)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,520)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,883)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,236)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,253)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,060)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,042)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,778)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,721)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,283)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,091)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,827)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,451)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,178)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,098)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,815)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,663)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,532)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,316)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,242)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,193)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,870)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,647)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,462)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (5,999)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !